Ubi Gobi na-ekpebi ikuku ikuku China | Netwọk Mgbasa Ozi
Uzuzu Gobi na-ekpebi ogo ikuku China
Obodo Beijing (China)
N'oge na-adịbeghị anya, e nwere ọtụtụ mba ndị obodo ha na-ekuru ikuku rụrụ arụ. Barcelona ma ọ bụ Madrid bụ ụfọdụ n'ime ha, mana okwu China dị oke egwu: dịka thetù Ahụ Ike Worldwa (WMO) si kwuo, kwa afọ ihe ruru nde mmadụ 1,6 na-anwụ site n'ihe kpatara mmetọ.
Na-atụgharị uche, ikuku site n'akụkụ Gobi na-ekpebi ikuku ikuku n'akụkụ a nke ụwa, dika otu ndi nyocha sitere na Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, gosiputara ya maka acronym ya na Bekee) na Scripps Institution of Oceanography na Mahadum California di na San Diego.
Maka ya ọmụmụ, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ »Nature», ndị ọkà mmụta sayensị jikọtara data akụkọ ihe mere eme na ụdị kọmputa. Site n'inyocha nsonaazụ ha nwere ike ịchọpụta nke ahụ Mbelata ájá sitere n'okike nke a na-esi n'ọzara Gobi dị n'etiti na ugwu China na-akpata mmụba nke anwụrụ ọkụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ China.
O doro anya ala ịkpa ahụ na-enyere aka ịgbanwuo ìhè anyanwụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe ole na ole, ala dị ọkụ karịa ka ọ dị na mbụ ma mmiri dị jụụ, nke na-ebelata ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ n'oge oyi n'etiti oke osimiri na ala. Nke a na-eme ka ikuku ghara ife ike, yabụ ikuku na-abụ "ikuku".
Ọ bụ ezie na nke a bụ mbelata naanị 0,16 kilomita kwa awa, mgbanwe a nwere mmetụta dị ukwuu na ihu igwe yana ikuku ikuku dị n'ebe ọwụwa anyanwụ China. Na Beijing, ha ebuso agha megide mmetọ ruo afọ atọ.
Nke a bụ ọmụmụ ihe na-atọ ụtọ, ọ bụghị naanị maka obodo ọwụwa anyanwụ, kamakwa maka ndị niile mmetọ anthropogenic na-emetụta, ebe ọ na-egosi na ihe niile ejikọtara, n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ.
Anwụrụ ọkụ bụ nsogbu dị oke egwu nke gọọmentị niile kwesịrị iji kpọrọ ihe ka ụmụ amaala nwee ike ịga n'ihu na-eku ume ikuku dị ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Uzuzu Gobi na-ekpebi ogo ikuku China